Uhlaziyo olutsha lweTelegram yeMac, inguqulelo 2.93 | Ndisuka mac
Akukho veki iphelileyo okoko iTelegram yeapp yeMac sele inenguqulo entsha emva kohlaziyo lwamva nje lwe-2.92. Kwaye isicelo seTelegram sinaso ibhalwe ngokupheleleyo ukusuka ekuqaleni ngesixhobo se-Swift 3.0, kwaye kuyinto eqhelekileyo ukuba ngoku uhlaziyo lutsibe ukulungisa iimpazamo kunye neebugs ezincinci ezinokuthi zisetyenziswe sisicelo esitsha. Kukho iimpazamo okanye iimpazamo ezinyanisekileyo esizifumene ekusebenzeni kwesiqhelo, kodwa oko akuthethi ukuba azinazo kwaye kule meko ziyalungiswa ukongeza ukongezwa kwesicelo.
Abathethi ngeziphoso ngaphandle kokwenza ezi zilungiso, kodwa kwicandelo lokuphucula sibona ukhetho olutsha oluvumela ngokuzenzekelayo ukubuyisela i-emojis kunye nolunye uphuculo kuyilo endinokuthi andinakuzibona zibonakala kakhulu, kodwa thina unokuba nesicelo esicaba ngakumbi kunangaphambili. Ngamafutshane, ezi ayizizo iinguqu ezinkulu, kodwa kubalulekile ukuba isicelo sihlaziyiwe ukonwabela uphuculo kunye nokusombulula iibugs ezifunyanwa ngabaphuhlisi.
Siqinisekile ukuba ayizukuba luhlaziyo lokugqibela kwaye sele siyazi ixesha elide ukuba iTelegram ihlaziywa rhoqo ukongeza uphuculo kunye nezisombululo kwiimpazamo ezinokubakho kwisicelo sayo seMac, kodwa sithetha ngokugqibeleleyo Isicelo esibhalwe ngokutsha kwaye ziinguqulelo eNtsha ezinokufika rhoqo. Khumbula ukuba Esi sicelo simahla kunye nohlaziyo lwabo bonke abo sele benesicelo esifakelweyo luyafumaneka ngqo ukusuka kwithebhu yohlaziyo lweVenkile yeApple yeMac.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Mac App Store » Uhlaziyo olutsha lweTelegram yeMac, inguqulelo 2.93